Qaramada Midoobay Ayaa Ka Digaysa Xasilooni Darada Siyaasadeed Ee Koonfurta Sudan Inay Saameyn Doonto Sudan » Axadle Wararka Maanta
Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa xasilooni darada siyaasadeed ee Koonfurta Sudan inay saameyn doonto Sudan
By Newsroom	 On Dec 12, 2021
JUBA – Xasilooni la’aanta siyaasadeed ee ka jirta Koonfurta Suudaan ayaa laga yaabaa inay saamayso dalka ay dariska yihiin ee Sudan oo ay ka go’day July 2011, ayuu yidhi Nicholas Haysom, madaxa xafiiska Qaramada Midoobay ee Koonfurta Suudaan (UNMISS) Arbacadii.
Hadalkan ayuu ka sheegay mar uu shir jaraa’id ku qabtay xarunta UNMISS ee magaalada Jubba, kaddib markii uu booqday caasimadda gobolka Unity ee Bentiu, si uu ugu kuur galo xaaladda fatahaadda.
“Waa arrin muhim ah oo maskaxdeenna ku jirtay. Koonfurta Suudaan iyo Suudaan waxay ku xidhan yihiin siyaabo badan oo ay ku jirto taariikhdooda. Laakiin waxaa si gaar ah loola xiriiriyay in midba midka kale uu taageersan yahay heshiis nabadeed iyo in taageeradaas la gaarsiiyo fududeynta. Waxaan ognahay in ilaa ra’iisul wasaare Hamdok la xiray, uu door ka ciyaarayay xallinta qaar ka mid ah arrimaha cutubka labaad laakiin taasi waxay joogsatay markii la xiray,” ayuu yiri Haysom.
Masuulka ugu sareeya Qaramada Midoobay ayaa ku macneeyay in labada wadan aysan isku xirin taariikhda oo kaliya balse ay jiraan heshiisyo nabadeed oo ay dhexdhexaadinayeen oo door hoggaamineed ay ka qaateen.
Waxa uu sheegay in Xariga Ra’iisul Wasaaraha Sudan, Abdullah Hamdok ay ciidamadu ku xireen bishii October ay si weyn u wiiqday doorkisa hogaamiye rayid ah ee dalkaasi.
“Waxaan ka walaacsanahay in maqnaanshaha taageerada Suudaan ay hoos u dhigto hirgelinta heshiiska nabadda. Laakiin taasi waxay noqon kartaa hal dhinac oo horumarka Suudaan uu saameyn ku yeelan karo Koonfurta Suudaan. Waxa kale oo jira saliidda ka soo baxda Port Sudan oo ay saamayn karto haddii horumarku mar kale ka dhaco Suudaan,” ayuu yidhi Haysom.
Sida laga soo xigtay madaxa Qaramada Midoobay, UNMISS waxay sii wadi doontaa taageerada xiriirka u dhexeeya Suudaan iyo Koonfurta Suudaan si ay u fuliyaan heshiisyada nabadeed ee ay wadaagaan, sida heshiiskii nabada ee Juba iyo heshiiskii nabada ee Khartoum.
“Sababo xasillooni dartood, waxaan rabnaa inaan aragno Suudaaniyiinta oo gaaray heshiis u oggolaanaya inay sii wataan socodkooda ku aaddan dimoqraadiyadda iyo barwaaqada iyagoo aan dooneynin inay ka hadlaan waxa taasi noqon karto,” ayuu carrabka ku adkeeyay.
Dhanka kale, Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Koonfurta Suudaan ayaa walaac ka muujiyay xaaladda bini’aadantinimo ee daran ee ka jirta qaybo ka mid ah magaalada Bentiu ee gobolka Unity oo ay sababeen fatahaado.
“Waxaan shalay ku sugnaa Bentiu oo aan indhahiisa ku arkayay sida cajiibka ah ee ay fatahaaduhu u saameeyeen boqolaal kun oo qof. Shalay markii aan u safray Jonglei si aan indhihiisa ugu soo arko saameynta fatahaadaha ay ku yeelanayaan bulshada iyo sidoo kale shaqada ay qoyska Qaramada Midoobay ku caawineyso, waxaan ku tilmaami karaa oo kaliya in xaaladdu ay tahay mid daran,” ayuu yiri Haysom.
Wuxuu intaas ku daray, “Biyaha fatahaaddu ma dhimayaan, boqolaal kun oo qofna waa ay ku barakaceen oo u baahan gargaar.”
In ka badan 800,000 oo qof ayay QM sheegtay inay si ba’an u saameeyeen daadadka ugu daran, gaar ahaan Koonfurta Suudaan ee Jonglei, Unity iyo Niilka Sare.
(This story #Qaramada Midoobay ayaa ka digaysa xasilooni darada siyaasadeed ee Koonfurta Sudan inay saameyn doonto Sudan. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.